Litecoin စျေးနှုန်း $ 48 သို့ကျရောက်, လာမယ့်ဘာလဲ
အဆိုပါ Litecoin price line returned towards the $47 to $48 range after trading near the $50 mark as the day concluded on the 15th of September, 2020. The crypto analyst Bitcoin Buddha is of the opinion that the LTC price will move above the $120 mark by 2022 as the cryptocurrency has recently broken abovea2-year long descending trend line.
1-Day Litecoin စျေးနှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အားဖြင့် Litecoin စျေးနှုန်းဇယား ကုန်သွယ်ရေးအမြင်
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်။ စာရေးဆရာများ၏ထင်မြင်ချက်များသည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်နည်းနှင့်မျှဘဏ္adviceာရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မပေးချေ။ Cryptopolitan သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောသုတေသနကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီအရည်အချင်းပြည့်ဝသောပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောဆိုရန်အထူးအကြံပြုသည်။
ရင်းမြစ် - https://www.cryptopolitan.com/litecoin-price-falls-to-48/
Tags: ရေတံခွန်, Litecoin, စျေးနှုန်း, အဘယျသို့
Bitcoin အတွက် Bakkt ရဲ့ ATH အသစ်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ယနေ့သူ၏ကုမ္ပဏီသည် BTC ဒေါ်လာ ၄၂၅ သန်းပိုင်ဆိုင်သည်